Khuphela iVidiyo yeThikha yeVidiyo yeYouTube - Inkxaso kwiiwebhusayithi ezininzi
Khuphela iVidiyo yeThikha yeVidiyo yeYouTube
❤ Khuphela yonke imifanekiso yemifanekiso kuyo nayiphi na ividiyo yeYouTube ngesixhobo esilula.
Ukufumana umfanekiso wevidiyo yayo nayiphi na ividiyo ye-YouTube faka i-URL yesiqhelo yevidiyo kwibhokisi ebhaliweyo engezantsi.
⚠ I-URL yakho ifanele ibukeke ngolu hlobo:
Fumana i-YouTube Isithonjana
Le ndawo ikuvumela ukuba ukhuphele iikhompyuter zayo nayiphi na ividiyo ye-YouTube ngokungena kwi-URL yevidiyo.
⚠ Iqhosha le-bookmark linenguqulelo entsha. Hlaziya ngoku.
⚠ Ezinye iinethiwekhi zentlalo kufuneka ziphinde zilayishe iphepha olibukeleyo okwangoku ukufumana isliphu efanelekileyo.
♳ Umncedisi 1
♴ Umncedisi 2
♵ Umncedisi 3
✚ Yongeza kwiNgcebiso
❝Yongeza ukubonwa kweevidiyo ngokongeza iingcebiso❞
☀ Isithonjana Grabber ixhasa ukhuphelo lwezikhombisi ukusuka Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, DailyMotion, Vimeo, Tumblr, Imgur, Liveleak, TED, Mashable, 9gag, Break, Soundcloud, Flickr, ESPN, IMDB, Buzzfeed, Okru, Metacafe, WorldStarHipHop kunye nokuninzi. ☁
Kutheni ukhetha esi sixhobo sihle kangaka?
Ukukhawuleza kunye nokukhululeka akufani
Izixhobo ezininzi ezongeziweyo
Inkxaso kwiiwebhusayithi ezininzi
❝Uluhlu lwemifanekiso lugcinwa kuphela kwisixhobo sakho❞
♻ Cacisa imbali
Cofa kwiqhosha leeNgcebiso ukufumana izimvo ezilungileyo.
Ukuba usebenzisa iMac OS X
Fumana yonke imikhombandlela yevidiyo ye-YouTube ngokuqhafaza.
Fumana isithsaba 2.0 ← Tsala oku kwibha yeebhukumaki zakho
Awuboni ibhukumaki yebhukumaka? Cinezela Shift+Ctrl+B
❝Esi skripthi sinokukhupha ipowusta yevidiyo kuyo nayiphi na iwebhusayithi.❞
Uyisebenzisa kanjani i-YouTube Thumbgins Image Generator
Inyathelo 1 : Ngena kwi-URL ye-YouTube
Khuphela kwaye uncamathisele i-URL yevidiyo ye-YouTube kwindawo ebonelelweyo.
Inyathelo 2 : Cofa ❝Fumana i-YouTube Isithonjana❞
Ukujonga kunye nokukhuphela umfanekiso we-YouTube umxholo, cofa kwiqhosha le-Orenji
Inyathelo 3 : Fumana iYouTube Video Thumbgins Image
Khuphela umfanekiso we-thumbnail ukusuka kwi-YouTube kumgangatho wemifanekiso emininzi kunye nobukhulu
Jonga kuqala ngaphambi kokuba Ukhuphele
Njengoko ucofa kwiqhosha lokungenisa emva kokuncamathisela i-URL yevidiyo, imbonakalo yazo zonke imifanekiso ezinikezelweyo inikezelwe. Ungakhangela ubungakanani bomfanekiso we-thumbnail kwaye ucofe ku Khuphela iqhosha lokugcina iiThumbnails zeVidiyo zeYouTube kwizixhobo zakho.
Khetha ubukhulu bakho bomfanekiso obuhle
Fumana iYunithi yeWebhu yeVidiyo yeYouTube kwiisayizi ezahlukeneyo ngokhetho lwakho. Xa unqakraza kwiqhosha lokukhupha, ukujonga imbonakalo yomfanekiso wokugqibela kwisayizi emininzi kubonelelwe. Ungakhetha ubungakanani be-thumbnail phakathi kwe-480x360, 120x90, 320x180, 1280x720 kwaye uyikhuphele.
I-YouTube Thumbgins Image Extractor yinkonzo eku-intanethi ekuvumela ukuba ujonge kwaye ukhuphele imifanekiso ye-YouTube kwividiyo ye-YouTube kwi-HD. Unokufumana isithabathaba somfanekiso osuka kwiYouTube nakweliphi na iqonga lakho ozithandayo njengesixhobo seWindows, umatshini weLinux, umatshini weMac, i-Android, okanye i-iPhone.
Simahla AkukhoMda kwiZero limited
Yinkonzo yasimahla kwi-Intanethi yokugcina umfanekiso we-YouTube Thumbgins. Udinga nje ukufaka ikhonkco kwaye ufumane iFoto yeWebhu yeVidiyo yeYouTube kwimizuzu. Ukongeza, inkonzo ayinasimahla nakuphi na ukusikelwa umda nayo. Sisicelo esisekwe kwisiphequluli kwaye sinokufikelela kulo naliphi na iqonga okanye isixhobo.
Fumana imibuzo kunye neempendulo zakho apha-Ungazikhuphela njani iiVidiyo zeVidiyo zeYouTube?
+ Yintoni i-thumbnail?
Iimpawu zemifanekiso ziphunyezwa ngokufanelekileyo kumaphepha ewebhu njengokwahlukana, iikopi ezincinci zomfanekiso wokuqala, ngokuyinxalenye kuba enye yeefoto zomfanekiso kwiphepha lewebhu kukunciphisa i-bandwidth kunye nexesha lokukhuphela.
Abanye abaqulunqi bewebhu bavelisa i-thumbnails nge-HTML okanye iskripthi secala labathengi elenza ukuba isiphequluli somsebenzisi sinciphise umfanekiso, kunokuba sisebenzise ikopi encinci yomfanekiso.
+ Ndingakwazi ukufumana zonke iiVidiyo zeVidiyo zeYouTube kwiividiyo zam kwisigqibo esiphezulu?
Ewe, unokukhupha ngokulula kwaye ukhuphele zonke iithombhdi zevidiyo yakho ye-YouTube ngokusebenzisa le nkonzo yokukhuphela.
Landela ngokulula amanyathelo alandelayo ukufumana umfanekiso we-thumbnail kwividiyo ye-YouTube:
Vula iphepha lewebhu leTouchkin yokukhuphela iphepha lewebhu.
Ndwendwela i-YouTube.com kwaye Khuphela ikhonkco lakho leVidiyo yeYouTube
Yincamathisele kwiBhokisi yokuNgena yeVidiyo yeYouTube.
Cofa kwi-Extract iqhosha lokubamba ngokukhawuleza zonke izithombisi zevidiyo yakho.
Umkhuhli wethu weVidiyo encinci yeYouTube uza kukhombisa ngokukhawuleza zonke iiThumbnails zeYouTube ezikwiVidiyo yakho.
Ungajongisisa ngokulula yonke imifanekiso yeThunyu kwaye ujonge ubungakanani bayo kwiiPixels.
Ukuba ufuna uKhuphelo, unokukhuphela kwakhona iiThumbnails zeVidiyo zeYouTube ngokunqakraza ku Khuphela iqhosha.
Yonwabela ukukhupha iiVidiyo zakho zeVidiyo.
Kuya kufuneka wenze ngaphezulu kwamanyathelo alula okusindisa imifanekiso yakho yeYouTube Video.
+ Ubungakanani ubukhulu be-YouTube?
Iifoto zevidiyo ze-YouTube ziyafumaneka kwiimpawu ezine ezahlukeneyo kunye nobukhulu: SD 640 x 480, MQ 320 x 180, HQ 480 x 360, HD 1920 x 1080.
Unokufikelela nakweyiphi na isayizi yomfanekiso wevidiyo ye-YouTube kwifomathi esemgangathweni. Ufuna nje i-ID yeVidiyo eyahlukileyo, enokujongwa kwi-URL yevidiyo.
Ifomathi yemifanekiso encinci: http://img.YouTube.com/vi/video_id/FILE_NAME.jpg
Ungachaza igama lefayile ngokuxhomekeka kubungakanani be-thumbnail oyifunayo. Ezinye zezinto ezisetyenziswayo zidweliswe ngezantsi:
http://img.YouTube.com/vi/video_id/0.jpg – Ubungakanani obugcweleyo
http://img.YouTube.com/vi/video_id/default.jpg – Ubungakanani obugcweleyo
http://img.YouTube.com/vi/video_id/mqdefault.jpg – Ukungagqibeki okuphakathi
http://img.YouTube.com/vi/video_id/maxresdefault.jpg – Isisombululo esiphakamileyo
http://img.YouTube.com/vi/video_id/1.jpg – Ncinci
http://img.YouTube.com/vi/video_id/2.jpg – Ncinci
http://img.YouTube.com/vi/video_id/3.jpg – Ncinci
+ Iyintoni injongo ye-YouTube Thumbnail Grabber or Generator?
Eyona njongo iphambili yale Mifanekiso yeWhatsApp yeYouTube kukuba unokukhuphela kunye nokufumana iiVidiyo zeMifanekiso yeVidiyo yeYouTube kuyo nayiphi na ubungakanani nakweyiphi na ividiyo. Yonke le mifanekiso iluncedo ngenene kulo msebenzi uqhubekeka njengokubhloga, uyila, okanye wabelana nabanye.
+ Yeyiphi yonke inketho zobungakanani bokukhuphela okanye ukwenza i-screen splash screen?
Lo mfanekiso obizwa ngokuba yiThumbanas Image Extractor ubonelela ngeendlela ezine ezahlukeneyo ngelixa ugcina isclash screen:
+ Yintoni ubungakanani bekhonkco leYouTube 2019?
Imifanekiso ye-YouTube ehambelana nesiko kufuneka ibe nkulu ngangoko inokwenzeka, njengoko umfanekiso uza kusetyenziswa njengomfanekiso wangaphambili kumdlali obethelelwe. I-YouTube yazisa izithombisi zakho zesiko: Yiba nesisombululo se-1280x720 (ngobuncinci bobubanzi beepikseli ezingama-640).
+ Ndisithatha njani isifinyezo kwividiyo?
Misa ividiyo kwindawo apho ufuna ukufaka umfanekiso, sebenzisa i-Screen Screen okanye isixhobo esitsolo ukufumana umfanekiso.
+ Uwufumana njani umfanekiso we-thumbnail kwi-YouTube?
Ncamathisela i-url yakho ye-Youtube kwibhokisi yokubhaliweyo engasentla ukufumana ubungakanani bezithombisi.
+ Ngubani ubungakanani bephepha lekhusi kwiYouTube?
Ifoto kaYouTube / Ubugcisa besitayile: 2560 x 1440 pixels.
I-YouTube iya kulungelelanisa umsebenzi wobugcisa bejelo lakho usebenzisa uyilo lwewebhu oluphendulayo. I-YouTube icebisa ukulayisha ubugcisa besitayile kwii-pixel ezingama-2560 x 1440 ngobukhulu beefayile ezi-2MB.
+ Ndiyifumana njani ikhowudi yokushumeka yethayile ye-YouTube?
Kukho kulula kakhulu ukufumana imifanekiso yeYouTube yemifanekiso kwividiyo ethile.
Yiya kwi-URL elandelayo: http://i1.ytimg.com/vi/Your-video-id/hqdefault.jpg
Ngoku, kuyakufuneka ulande i-id yevidiyo nokuba yeyiphi kwividiyo ye-Url okanye ikhowudi yevidiyo ye-YouTube.
+ Ndikopa njani umfanekiso ovela kwi-YouTube?
Fumana i-id yakho yeVidiyo kwi-youtube kwaye unamathisele kwiibhokisi ezingaphezulu, cofa iqhosha ❝Fumana i-YouTube Isithonjana❞.
+ Yintoni i-URL yevidiyo eyi-YouTube?
+ Uyenza njani download i-1080p?
Esona sigqibo sikhulu sewebhu yevidiyo zeminwe ezingama-1280x720.
Izitayile ezili-1080p azifumaneki.
Kuya kufuneka usebenzise isikrini sokudibanisa iqhosha ukufumana umfanekiso.
Cinezela Alt + Print Screen.
Ezinye iimodeli zinokubhala icocekile isitshixo sokushicilela PrtScn, Prnt Scrn, Print Scr.
Ukuba usebenzisa iMac OS X, Cinezela Shift + ⌘ + 3
+ Ngaba kukhuselekile ukusebenzisa le nkonzo yokukhuphela umfanekiso we-YouTube?
Ukhuseleko yinto ephambili yethu, ngoko ke yonke intengiso yabantu kule webhsayithi ibhalelwe i-SSL. Ngale protocol yenethiwekhi ekhuselekileyo, idatha yakho ikhuselwe ekufikeleleni ngumntu wesithathu. Ukukhutshelwa kwemifanekiso yenyani yenyani esebenzayo ngokunxibelelana ngokuthe ngqo kumncedisi we-YouTube.
Yongeza iQhosha lokuDibanisa kwiFayile kwi-Intanethi
Fumana ividiyo yeYouTube ekwi-Intanethi
Thatha isithombe-skrini kwindawo yesiko
Gcina i-subtitles yevidiyo ye-YouTube
Ukukunceda ukukhuphele iividiyo kunye nevidiyo ngokukhawuleza kuyo nayiphi na iwebhusayithi (ngaphandle kwe-YouTube)
Umrhumo wobhaliso we-YouTube
Umbala uMngcipheko we-YouTube
Fihla iikhomenti ze-YouTube
Indlela yeRadiyo yeYouTube
Isilinganisi kunye neAmplifier yeYouTube
Ezona ngoma zintsha
Indlela i-Youtube yesiko eliyimigca ikunceda ngayo ekuboneni ezinye iimbono
Ngaba ujonge izithombisi ezilungileyo zeYouTube? Ngaba ufuna ukufumana impembelelo yokuyila eyakho isiko yoyilo? Usendaweni elungileyo!
Ukwenza izithombho zesiko akuyiyo kuphela indlela yokuphakamisa uphawu lwakho luphela, kodwa ikwayindlela yokuphembelela ababukeli ukuba bakhethe ividiyo yakho kuzo zonke iindlela ezikhoyo. Hayi, i-thumbnail yesiko ayizukuwenza umxholo wakho ulunge ngakumbi kunokuba injalo kubalulekile ukugxila ekudaleni umxholo osemgangathweni - kodwa iselitshi iya kunceda umxholo wakho omangalisayo ukuba uqaphele!
Ukudala iiThumbnails ezinkulu zeVidiyo zeYouTube
Njengoko kukhankanyiwe apha ngasentla, ufuna ukuba izithombisi zakho zenziwe uphawu kwaye zibandakanyeke. Kukho iimpawu ezimbalwa eziqhelekileyo esizichonge kwi-YouTube thumbnails apha ngezantsi.
Into ephambili yokuqala okanye umxholo
Ukongeza kule mikhwa ingentla, kwakucacile ukuba ukudala ii-cutouts, okanye imifanekiso emilikileyo, yesentloko eyintloko yayiyinto ethandwayo yoyilo kwabo banexesha, imali, abasebenzi, okanye ubuchule obufunekayo bokuyisusa.
Yintoni eyenza iiThumbnails zeYouTube zibaluleke
Ukuyila imifanekiso yeYouTube kwahluke kakhulu kunoyilo lwenethiwekhi yoluntu okanye ukudala imifanekiso yentengiso kwiwebhu. Ngoba? Kuba uphawu lwakho kuya kufuneka lukhuphisane nenqwaba yezinye iintlobo.
I-icon, ngokukude, yinto etsala uninzi ngaphandle kokujonga ngqo kuyo.
Iindaba ezimnandi zezokuba ungasoloko ubuyela kuzo naziphi na iividiyo kwilayibrari yakho kwaye uhlaziye iitshiphu kwixa elizayo ukuba izithombisi zakho zekhaya ze-YouTube aziveli kanye ngale nto ubuyifuna.
Iimpawu ezongeziweyo ngeeMifanekiso ezincinci
Ayizizo zonke ii-brands eziphuma kwindlela yabo yokuyila ngokuyilwa kwe-YouTube. Ngokwenyani, uninzi lweendlela akhange lwenze kwanto- kwaye khange bakhethe ithontsi ebambekayo.
UkuYila iiYunithi zeTekhonkco zakho zeYouTube
Enye into ekufuneka uyiqwalasele ubungakanani bokuyilwa kwako. Ngamanye amagama, ngaba uyakulandela uyilo olucacileyo olukufuna nje ukuba uguqule imvelaphi, isicatshulwa kunye nemibala okanye ngaba uza kuyilandela uyilo oluya kufuna umbonisi oyingcali ukwenza uyilo olutsha?
Uyilo lweNBA luyimodeli elungileyo yoyilo olubunjiweyo kunye nokulula ukuvelisa. Nabani na onezakhono ezisisiseko zoyilo unokudala ngokulula itemplate entsha ngomxholo ohlaziyiweyo.
Uyenza njani i-YouTube logo yakho?
Ayisiyo ngxaki leyo. Ukuba uyayazi indlela yokusebenzisa iFotohop ungayenza lula i-viral thumbnail yeividiyo zakho okanye ungasebenzisa nayiphi na into ekwi-Intanethi ye-YouTube umenzi kunye ne-templatehop yeFotohop.
Umfanekiso wakho wekhonkco wesiqhelo kufuneka ube mkhulu ngokusemandleni, njengokuba umfanekiso uza kusetyenziswa njengomfanekiso wembonakalo kumdlali oshumelisiweyo. Yiba nesisombululo se-1280x720 (ngobuncinci ububanzi beepikseli ezingama-640). Faka iifomathi zemifanekiso ezinje ngeJPG, GIF, BMP, okanye PNG.
Iindlela ezili-10 zokufumana ngaphezulu kwi-YouTube
Landela la manqaku alula ayi-10 okanye nangaphezulu ukunceda ubeke iividiyo zakho zeYouTube ukufumana iimbono ezininzi kunye nedola kubo.
⓵ Sukuchitha ixesha lakho ukuze ulayishe ividiyo ngaphandle kokunxulumene nomxholo we-YouTube okwakho.
⓶ Qamba ividiyo yakho ngesihloko emva koko uyilayishe kwiYouTube. Bhala inkcazo ebambekayo yamagama angama-300 evidiyo yakho kwaye uncamathisele isihloko sakho kumgca wenkcazo.
⓷ Namathisela itayitile yakho yevidiyo njengoko in tags. Soloko usebenzisa igama lakho lesiteshi njengethegi. Kuyanceda ukubonisa iividiyo zakho zevidiyo kwicebiso kwaye ungalibali ukongeza iiegi zevidiyo ezifanelekileyo kodwa kufuneka uzisebenzise kwinkcazo ngaphambi kokuzisebenzisa njengethegi. Ngaphandle koko iya kuthatha njengokupela.
⓸ Yongeza iikhonkco zakho zevidiyo kunye namaphepha eendaba ezentlalo aqhagamshela kwinkcazo. Yabelana ngevidiyo kwi-Twitter okanye kwi-Instagram nge-hashtag kwaye uzame ukongeza enye yeethegi eziqhubekayo.
⓹ Fumana ividiyo enxulumene ne-niche yakho usebenzisa i-tags ye-Twitter kwaye ulayishe kwisiteshi sakho kwaye wabelane ngeteki efanayo yokujonga. Ngokwenza oku kunamathuba amaninzi okuba iividiyo zakho zihambe zintsholongwane kwaye ukuba iya kuhamba intsholongwane ngokuqinisekileyo uya kufumana umvuzo ngakumbi ngakumbi ngokulayisha iividiyo ze-YouTube. Yabelana kwakhona ngeBlogger, Reddit, Tumblr, Pinterest, Google Plus kunye ne-Facebook tag.
⓺ Fumana ividiyo evakalayo kwi-Google Trends enxulumene niche yakho kwaye wenze ividiyo elula kuyo kwaye uyilayishe kwisitishi sakho. Ngale ndlela wenza amathuba ngakumbi ividiyo yakho yokufumana intsholongwane yoluntu.
⓻ Ukuba uyazi malunga nentengiso ehambelana nayo inokukunceda ufumane iidola ezininzi kwisiteshi sakho. Khetha imveliso elungileyo ehambelana niche yakho kwaye wenze ividiyo yokubamba kuyo kwaye uyilayishe. Emva kokulayisha unamathisela ikhonkco lakho lokudibanisa kumgca wokuqala wenkcazo ukuze umntu enze imeko yakhe yokuthenga imveliso yakho emva koko unokulandela ikhonkco lakho ukuyithenga. Ke indibaniselwano yindlela entle yokufumana ngaphezulu.
⓼ Gxila kumgangatho hhayi ubuninzi kwaye usebenzise amagama aphakamileyo e-cpc. Landela ezi ngcebiso zilula ukongeza umbono wakho wesitayile oya kukunceda ufumane imali ngakumbi kwi-YouTube.
⓽ Iithagethi zenkqubo ye-premium ukuba ibe neqondo le-cpc elungileyo kwaye ufumane igama eliphambili le-cpc
⓾ Yenza umfanekiso wekhonkco we-Youtube ividiyo yakho ukuze abantu bayifumane inomdla. Ukuba awuyazi indlela yokwenza i-clip ka-YouTube yangoku unokuyikopa ngokulula kwezi vidiyo zinomdla kwaye zinxulumene nevidiyo yakho. I-thumbnail enomdla ihlala ithinta ingqalelo yabantu kwaye ibanyanzele ukuba babukele loo vidiyo. Ke yigcine engqondweni.
Gcina imifanekiso yevidiyo youtube kunye nevimeo yayo yonke imigangatho mahala. Esi sicelo kukuvumela ukuba ukhuphele i-thumbnails yayo yonke imigangatho. Ukuncamathisela nje i-URL yevidiyo ye-thumbnail kokufakwayo apha ngezantsi kwaye ucofe uQeqesha umfanekiso.
Olona luhlu lubalaseleyo lweThabile leYouTube-Gcina iiTouchna zeVidiyo zeVidiyo
Khuphela ividiyo ye-youtube yasimahla kwi-movie epheleleyo kwi-HD epheleleyo (1080), HD (720), SD, nakwiisayizi ezincinci. ngoku ziifomati ezixhaswayo: YouTube (HD, HQ, 1080p, 4K)
Ilungelo lokushicilela © 2019
Veza inkxaso yakho kwaye wabelane ngale webhusayithi:
Ndisebenzise le nkonzo yokukhuphela umfanekiso we-thumbnail ukudala izikrini zeplash yeprojekthi yam ezayo. Ixesha elinje lokugcina ixesha, mhlawumbi liza kundisindisa iiyure zexesha liphela kwaye lisebenza ngokugqibeleleyo.
Malunga TOS umthetho wabucala Qhagamshelana nathi Sitemap Facebook